Kedu ihe bụ netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kacha baa uru maka ecommerce? | ECommerce ozi ọma
Kedu ihe bụ netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kacha baa uru maka ecommerce?
José Ignacio | | eCommerce, Marketing, Ahịa ahia
Obi abụọ adịghị ya na netwọkụ mmekọrịta abịala na ngalaba e-commerce iji nọrọ. N'ihi na ọ ghọọla ike nkwukọrịta ọwa maka zụọ ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ ihe ndị a. N'agbanyeghị ụdị ya, ma ọ bụ uwe egwuregwu ma ọ bụ ngwaahịa sitere na oge ezumike ma ọ bụ oge n'efu. Enweghi oke oke maka mmejuputa ya na usoro mgbasa ozi dijitalụ dị ugbu a.
Na uru na ị gaghị ewepu onwe gị na otu netwọkụ mmekọrịta. Ọ bụrụ na ọ bụghị, na ntụle, ị nwere ọtụtụ ọgbakọ na njirimara ndị a yana ị nwere ike iji dị ka ị masịrị dabere na profaịlụ nke ụlọ ọrụ ịntanetị gị nwere. Site na esemokwu dị nro site na netwọkụ mmekọrịta ọzọ na nke ọzọ ị kwesịrị ịtụle site ugbu a gaa n'ihu ka arụmọrụ ndị a wee baa uru karịa ruo ugbu a.
Iji nyochaa nke bụ netwọkụ kacha baa uru maka ecommerce, ị ga-enyocharịrị ihe ị na-achọ na ọrụ ọkachamara a, oge gafere oge ị setịpụrụ iji mezuo azụmaahịa a n'ịntanetị yana nke ahụ lelee ihe bụ ihe onwunwe nke ị ga-ahọrọ otu ma ọ bụ karịa netwọk mmekọrịta na ọnwa ndị na-abịanụ. Ruo na ị nwere ike ịhụ na nsonaazụ ya na-enye afọ ojuju karịa ka ị chere site na mbido.
1 Netwọk mmekọrịta mmekọrịta bara uru: Linkedin
2 Youtube na ike nke ihe oyiyi
3 Facebook: ọtụtụ ndị ọrụ na-akwado ya
4 Twiter ọzọ nke ochie n'oge ọrụ
5 Pinterest: na nkọwa dị irè karị
6 Google + na ụdị nke kachasị ya
Netwọk mmekọrịta mmekọrịta bara uru: Linkedin
N'ezie, netwọkụ mmekọrịta niile dị ike iji mezuo ebumnuche azụmaahịa gị. Mana ọtụtụ na nke a na ọ bụghị netwọkụ maka ndị mmadụ n'otu n'otu, mana nke ọzọ bụ netwọkụ ọkachamara ma ọ bụ otu ahụ ka ọtụtụ ndị ọrụ si aghọta ya gburugburu ụwa. N'ihi na n'ezie, ọ bụrụ na ihe nwere ike ịkọwa Linkedin, ọ bụ n'ihi oke uru ọ bara maka metụtara ụlọ ọrụ ndị ọzọ na n'ezie ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ahịa.
Site na ya, ị gaghị enwe nhọrọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-ekere òkè ma na-adọta ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ ka ha wee nwee ike ijide ozi ịchọrọ izi ha site ugbu a gaa n'ihu. N'echiche a, ị gaghị echefu na netwọkụ mmekọrịta a na-enyere aka na mmechi nkwekọrịta azụmahịa nke nwere ike ịbara ndị ọrụ gị uru. Ọ dị ezigbo mkpa ịmụta site na okwu ịga nke ọma na ọdịda nke ụlọ ọrụ ndị a.
Mgbe n'aka nke ọzọ, ị gaghị eleghara usoro akụkụ nke mmegharị gị na netwọkụ mmekọrịta anya. Dị ka ihe atụ, ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọsa a ọzọ ụlọ ọrụ ụzọ, na-emebi ihe akụrụngwa nke onwe. Dịka ọ bụ ngwa dị ike, ọ bụghị naanị izute ndị mmadụ nwere ike ịmasị, kamakwa ndị otu azụmaahịa. Ihe nke na - enweghị ike ime site na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ amachaghị ọrụ.
Youtube na ike nke ihe oyiyi
Nke a bụ ihe ọzọ na netwọk mmekọrịta ị nwere ike ịba uru n'oge a n'ihi njirimara pụrụ iche nke a na-enye gị nkwado na nkwukọrịta onwe onye na nke azụmahịa. N'echiche a, ọ dịghị ihe dị mma karịa itinye aphorism ochie ahụ n'ọrụ nke na-ekwu na "foto dị mma otu puku okwu". Ọfọn, oge eruola itinye ya n'ọrụ iji bulie ọrụ ọkachamara gị site na nraranye pụrụ iche.
You gaghị echefu na n'akụkụ a nke na-akwado nkwado na nkwukọrịta egwu nke nwere ike ịnwe nnukwu nkwado iji jikwaa ụlọ ahịa gị ma ọ bụ azụmahịa kọmputa. Site n'ụzọ dị iche iche dị iche na netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ pere mpe iji nyefee ozi ịchọrọ ịnye ndị ahịa na ndị ọrụ gị. Ọ bụ usoro dị ike nke a na-ejikarị oge ụfọdụ maka akara ma ọ bụ mkpọsa ngwaahịa, ọ bụ ezie na ọ nwekwara uru dị ka onye na-akwado nkwukọrịta ụlọ ọrụ. Karịsịa na ụlọ ọrụ dijitalụ niile dị ka nke gị.
Facebook: ọtụtụ ndị ọrụ na-akwado ya
Ọ bụ otu n'ime nnukwu netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kacha mma yana nke ahụ nwere ike ijikwa ọdịmma gị na-enweghị nnukwu nsogbu na usoro. Ọ bụ nhọrọ doro anya nke mere na ọ nwekwara ọtụtụ ntinye maka mpaghara niile, mana otu n'ime nsonaazụ kachasị bụ ntụrụndụ. N'aka nke ọzọ, ị gaghị echefu na ha gụnyere na-ekwu, ihe oyiyi, ihe omumeMana nke kachasị, njikọ gụnyere na akụ ndị a niile akpọrọ.
Ọ bụ ụzọ dị mfe iji weghara uche ndị ahịa gị na ndị ọrụ gị site na iji ụzọ dị mfe site ugbu a gaa n'ihu. Ebe enwere obi abụọ ọ bụla na ọ bụ ikpo okwu nkwukọrịta nke a na-enweghị ike ileghara anya, mana ekwesịrị ịkọwapụta ya na iwebata n'ahịa karịa ma tụlee usoro echiche siri ike karị site na echiche azụmahịa.
Twiter ọzọ nke ochie n'oge ọrụ
N'iji njirimara yiri nke gara aga, na nke a, ọ bụ ngwa nkwukọrịta zuru oke iji chịkọta ihe ndị dị mkpa gbasara otu ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ruo na ejiri ya mee ihe dị ukwuu na-akwalite a ika oyiyi yana nnukwu nchekwa na mmefu nke ụlọ ọrụ ahụ. Ọ bara ezigbo uru na ụfọdụ mpaghara dijitalụ, dị ka nkwukọrịta, ụlọ nri na teknụzụ ọhụrụ na oge ezumike na ntụrụndụ.
Ọ dị nnọọ ka nke gara aga, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a akọwapụtara na mbelata ego maka ụlọ ọrụ n'ịntanetị dị ezigbo mkpa. Ruo n'ókè nke na ọ nwere ike ịbụ isi iyi nke ego na nkọwapụta ego gị site na mmalite ọrụ ọrụ gị. Site na ntinye aka nke emeputara nke oma nke otutu ndi amaala uwa mara.
Pinterest: na nkọwa dị irè karị
N'ezie, ọ bụ otu n'ime usoro ọhụụ kachasị dị na ntanetị mmekọrịta na nso nso a ma ọ bụ na anyị nwere ike ikwu maka ọnwa. N'ihi na ọ bụ ikpo okwu dijitalụ nke e ji asụsụ ya na-eme ihu na ihu na-enwe mmetụta dị ukwuu na ndị ọrụ. N'aka nke ọzọ, nkọwa nke a ga - enwerịrị site na netwọkụ mmekọrịta a ga - adị mkpụmkpụ karịa nke ndị ọzọ, yana data ga - adịkarị karịa karịa mgbe ọ bụla. Nke ahụ bụ, dabara adaba maka mpaghara dijitalụ, dịka ndị sitere na ngalaba azụmaahịa kachasị mma nke gburugburu azụmaahịa.
N'aka nke ọzọ, ọrụ a na-ahụ anya ga-abụ onye ọzọ n'ime ndị na-ekwukarị ya, dị ka ozi ndị ọzọ maka ndị ahịa nọ na ntanetị mmekọrịta a. Ọ na-enyekwa ihe dị oke egwu ka i wee nwee ike igosipụta katalọgụ nke ngwaahịa ndị a na-ere site na ndị mmekọ na netwọkụ. Mgbe n'aka nke ọzọ, onyinye ya ohuru n'iwepụta ozi mgbasa ozi yana ụfọdụ ihe bara uru maka ndị otu so na usoro azụmaahịa a maara nke ọma.
Google + na ụdị nke kachasị ya﻿
Anyị enweghị ike ichefu usoro ịntanetị a nke nwere ike ịdị irè site ugbu a gaa n'ihu iji bulie ọrịre ngwaahịa, ọrụ ma ọ bụ isiokwu anyị. N'okwu a, n'ihi na ọ na-enye anyị ohere ịkekọrịta ihe dị iche iche, site na mmelite na njikọ na ibe, ma ọ bụ ngalaba ụfọdụ, dị ka ihe oyiyi, vidiyo, wdg. Nke ahụ bụ ịsị, dabara adaba maka ịme ihe ezubere iji kwalite azụmahịa dijitalụ anyị n'usoro nyocha ndị ọzọ nke ntanetị mmekọrịta nke onwe ya.
N'aka nke ọzọ, a na-ahụ njikọ a n'etiti ndị mmadụ site na ike ya iji ruo ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ. Ebe ị nwere ike igosi profaịlụ ọha nke ụlọ ọrụ anyị iji nwalee ndị ọzọ mara ya ma mara ihe anyị na-eme. Ọ bụ, na nkenke, ikpo okwu nkwukọrịta dijitalụ na, ọ bụrụ na ọ dabara na profaịlụ anyị, nwere ike ịdị irè iji mezuo ebumnuche anyị kachasị na ọrụ ọkachamara anyị.
Site na usoro a, a na-atụ aro ka ị mara ọrụ ya kachasị dị mkpa yana ị nwere ike iji ha mee ihe zuru oke site ugbu a site na ọrụ ọkachamara. N'ihi na dị ka a pụrụ isi kwuo ya, enwere ike ịkekọrịta akụkọ n'etiti ndị ọrụ ka otu a wee nwee ike ịkwalite azụmahịa gị site na netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta pụrụ iche. Dị ka ozi niile ịchọrọ inye ọhaneze nke kacha amasị gị na nke ahụ nwere ike ime ka ọhụhụ gị na azụmaahịa gị.
Ọ dị nnọọ ka nke gara aga, ọ bụ ezie na n'ọnọdụ a akọwapụtara na mbelata ego maka ụlọ ọrụ n'ịntanetị dị ezigbo mkpa. Ruo n'ókè nke na ọ nwere ike ịbụ isi iyi nke ego na nkọwapụta ego gị site na mmalite ọrụ ọrụ gị. Site na ntinye aka nke emeputara nke oma nke otutu ndi amaala uwa mara. . Site na esemokwu dị nro site na netwọkụ mmekọrịta ọzọ na nke ọzọ ị kwesịrị ịtụle site ugbu a gaa n'ihu ka arụmọrụ ndị a wee baa uru karịa ruo ugbu a.
Ha bụ ụfọdụ n'ime nyiwe ndị nwere ike inyere gị aka ịkwalite azụmahịa dijitalụ gị ma jigide ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ site na usoro dị mfe maka mmadụ niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Kedu ihe bụ netwọkụ mmekọrịta mmekọrịta kacha baa uru maka ecommerce?
Na-eduzi usoro SEO na SEM ọhụrụ maka azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị
Zọ ịkwụ ụgwọ na azụmahịa kọmputa